Isiginali, ekugcineni ngaphandle kwezintambo zeGoogle | Kusuka kuLinux
babel | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Izaziso
Isignali isebenzisa Umlayezo Wamafu we-Firebase (ngaphambili i-Google Cloud Message noma i-GCM), njengoba ucabanga, incike ku-Google. Kuthiwa i-Google iletha kuphela futhi yamukele idatha futhi ayikwazi ukuyifunda (engabakhululi ekubeni nerekhodi lokuthi ubani okhuluma nobani), kepha noma kunjalo, ukusebenzisa iSiginali kusho ukuthi ifoni ne-Google ibambelele kumathumbu, okubandakanya olunye uhlobo yokukhubazeka kobumfihlo ... noma okungenani bekuvele kuze kube manje. Gcina lolu suku njengoba usuku lweSiginali lube uhlelo lokusebenza lomyalezo wangasese oluhamba phambili.
1 Isiginali ngeWebSocket esikhundleni se-GCM
2 Isiginali ku-PC
3 Okungeziwe kuVivaldi
Isiginali ngeWebSocket esikhundleni se-GCM
Njengoba bonke labo ababandakanyeka empini yokulwela ubumfihlo bazi, Isignali Kuyinto uhlelo lokusebenza oluhle olubethela imilayezo yethu kusuka endaweni kuya ephoyinti; ngisho noSnowden - lowo ovule amehlo omhlaba wonke ngokubika ngobunhloli besibalo sabantu yizinkampani nohulumeni - uyisebenzisa nsuku zonke, kodwa iSignal ibinenkinga eyenza ukuthi ingasebenziseki kubantu abaningi: isebenzise i-Firebase Cloud Messaging (noma i-GCM ngegama layo elidala: Umyalezo we-Google Cloud). Lokhu kushintshe lapho Moxie Marlinspike isikhangiso NgoFebhuwari 20, iSiginali ngeke idinge ukusebenzisa iGoogle ukuphatha imilayezo evela ku-version 3.30 (njengamanje eku-beta futhi okungafanele kuthathe isikhathi eside ukufika kunguqulo ezinzile), okuyizindaba ezimnandi kubo bonke labo Sisebenzisa umakhalekhukhwini ngaphandle kweso le-Google elihlala likhona.
Futhi bazohamba kanjani ngokuletha izaziso Phusha nokuphatha imiyalezo? cunt I-WebSocket, “Ubuchwepheshe obuhlinzeka ngeziteshi ezimbili zokuxhumana futhi i-duplex ephelele ngaphezulu kwesokhethi elilodwa le-TCP ». Ngamazwi alula, uhlelo lokusebenza luzokwazi ukubona ukuthi lunezinsizakalo ze-Google Play. Uma kunjalo, izosebenzisa i-GCM; uma kungenjalo, iWebSocket.
Ezinye izindaba ezimnandi ukuthi, njengoba kungasadingeki ukusebenzisa iGoogle, kunezinhlelo zesikhashana zokubeka iSiginali ezitolo zamahhala ezifana neF-Droid, ngokusemthethweni noma ngokusebenzisa izinqolobane.
Elinye iphuzu elinzima ukuzungeza ukusebenzisa iSiginali kukhompyutha. Ukuphela kwendlela yokukwenza bekuvame ukuba nge-Google Chrome noma nge-Chromium enhle kakhulu (enye indlela yomthombo ovulekile we-Chrome). Inkinga ukuthi, futhi, bekudingeka ukusebenzisa amaseva weGoogle njengoba lezi ziphequluli zixhuma ne-akhawunti yakho ukuvumelanisa konke.
Kukhona futhi inketho yokusebenzisa isiphequluli Vivaldi okuthi, njengoba kusekelwe ku-Chrome, isebenzisa izandiso ezifanayo nama-plugins. Uma uku-Debian noma okuphuma kukho (Ubuntu, okuyisisekelo, njll.), Kufanele nje ulande ifayela le-.deb kusuka lapha bese ubhala: sudo dpkg -i Descargas/vivaldi-stable1.7.735.46-1amd64.deb ; sudo apt-get -f install. Qaphela ukuthi ngemuva kwepharamitha -i yindlela lapho ifayela le-.deb lilandwe (imvamisa ifolda Yokulanda kufolda yakho yasekhaya). Uma usufakiwe uVivaldi iya ku- https://chrome.google.com/webstore/detail/signal-private-messenger/bikioccmkafdpakkkcpdbppfkghcmihk bese ufaka i-Signal web app ukuze ukwazi ukuvumelanisa ifoni yakho nekhompyutha.
Endabeni kaFedora, usadinga ukulanda ifayela le- rpm ifayela bese ubhala sudo rpm -ivh Descargas/vivaldi-stable1.7.735.46-1amd64.deb. Kuyafana nesibonelo esingenhla, qiniseka ukusetha indlela elungile ngemuva -ivh.
Uma usebenzisa i-Arch noma okuphuma kukho (i-Antergos, iManjaro, njll.), Konke kulula kakhulu. Vele uthayiphe yaourt -S vivaldi futhi yilokho
Vula ama-Whisper Systems Akaholi imali ngokukhangisa noma ngokuthengisa imininingwane yabasebenzisi bakhe, ngakho-ke uma usebenzisa iSignal futhi unganikela ngokuthile, nali ikhasi lakhe le iminikelo.
IVivaldi yisiphequluli esenziwe yi-CEO yangaphambilini ye-Opera ngomzamo wokubuyela endleleni okuthi, ngokusho kwakhe, i-Opera ilahlekile. Kusengumsebenzi oqhubekayo, ngakho-ke izinto ezithile azisebenzi njengoba kufanele, kepha ungahlala wenza okuthile. Into ecasula kakhulu ekusetshenzisweni kwayo okujwayelekile ku-GNU / Linux ukungakwazi kwayo ukudlala amavidiyo, kepha kuyinto elula ukuyixazulula. Kulokho sidinga iphakethe chromium-codecs-ffmpeg-extra noma libavcodec-extra57 ku-Debian (sudo apt install chromium-codecs-ffmpeg-extra o sudo apt install libavcodec-extra57), okubandakanya ama-ffmpeg codecs wokudlala cishe noma yikuphi okuqukethwe kuwebhu. Uma ufuna ukudlulela phambili futhi udlale nezinto ezivikelwe nge-DRM (njengeNetflix), lokho kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe kepha akunakwenzeka. Ngalokho udinga ukulanda lo mbhalo futhi uyiqhube. Ukwenza lokhu, kopisha okuqukethwe kweskripthi, vula isihleli sombhalo, unamathisele okuqukethwe bese ulondoloza ifayela njenge- latest-widevine.sh (ligcine kufolda yakho yasekhaya noma shintsha imiyalo elandelayo nendlela lapho iskripthi sikhona). Ngemuva kwalokho sebenzisa le miyalo:
sudo chmod 764 latest-widevine.sh (lokhu kunikeza izimvume zokusebenzisa iskripthi)
sudo ./latest-widevine.sh (sebenzisa iskripthi okukhulunywa ngaso)
Iskripthi ngokuyisisekelo sifaka i-Chrome, sixhumanisa libwidevinecdm.so (ilabhulali edingekayo yeNetflix) neVivaldi, futhi ekugcineni isuse i-Chrome.
Endabeni ye-Arch kanye ne-derivatives, njengenjwayelo, konke kulula kakhulu. Vele uthayiphe yaourt -S vivaldi-ffmpeg-codecs vivaldi-widevine futhi nge-voila, uzoba nama-codec evidiyo kufaka phakathi okudingekayo ukuze ubuke iNetflix.
Uma usukwenzile lokho uzokwazi ukujabulela ukubuka uchungechunge noma i-movie ku-Netflix ngenkathi uxhumana ngeSignal noxhumana nabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Isiginali, ekugcineni ngaphandle kwezintambo zeGoogle
Inkinga ihlala injalo ngaphandle kokuthi singabasebenzisi abaphambili futhi siyizimpande kwikhompyutha yethu (futhi ikakhulukazi uma siguqula iROM).
Okomsebenzisi ojwayelekile izinto zizofana njalonjalo. I-Telegram inikeza inketho yokungasebenzisi i-Play Services.
Vele, le ndatshana yenzelwe abasebenzisi abasezingeni eliphakeme, ikakhulukazi, abangafuni ukuba nezinsizakalo ze-Google Play ocingweni lwabo. Uma umsebenzisi engekho kwezobuchwepheshe, ngokuqinisekile uzojabula nge-whatsapp futhi yilokho kuphela.
Ngokuqondene neTelegram, ngiyithanda kakhulu futhi empeleni ngiyisebenzisa nsuku zonke, kepha ngasese ayiyinhle ngoba ayibetheli lutho ngokwakhona. Ukubethela nakho akunakwenzeka ngamaqembu.
Ngemuva kwesikhathi. Ngicabanga ukuthi umzuzu weSiginali wezithameli eziningi usudlulile kanti iTelegram isithathe isikhundla sokuthi iSiginali bekufanele ihlale kuso kusukela ekuqaleni njengoba ivikeleke ngokwengeziwe kune-Telegram, engasebenzisi ukubethela kwe-e2e ngaphandle kwezingxoxo eziyimfihlo.
Manje abantu abafuna esinye isithunywa ku-Wasa sebesebenzisa iTelegram, futhi iSiginali ayikwazi ukuncintisana nokusebenza okuyinkulungwane kwe-TG (iziteshi, ama-bots, izitika, iTelegra.ph, nalabo abazoza).
Ukudabukisa, ngoba ukwenqaba kweDuroc ukushicilela ikhodi yamaseva abo nokushicilela ikhodi yohlelo lokusebenza lweselula ngasikhathi sinye lapho beshicilela khona i-apk ku-Gplay kwenze kwaba ngokoqobo kusoftware ephathelene nokuthi njalo ezinyangeni ezi-3 noma ezi-4 zivulekile umthombo, kuze kube yilapho inguqulo ekhishwa yikhodi yabo ingasasebenzi futhi futhi akekho noyedwa ngaphandle kwabo owazi ikhodi yomthombo. Kepha noma ngabe iSignal ibinokusebenza kwe-TG, abantu abasazoguquka; kanye kulungile, kusuka ku-WA kuye ku-TG, kepha hhayi kabili.
Noma kunjalo, okungenani kulabo abakhathazeke kakhulu ngobumfihlo babo kuseseyizindaba ezimnandi ukuthi bangasebenzisa i-Signal kumadivayisi wabo wakwaGoogle.amahhala, noma ngabe beyiqembu elincane kakhulu. Izindaba ezimnandi, noma kunjalo.
ayisebenzi ku-lubuntu 16